Digy Fenoarivo Ny antsasak’ireo andrin-jiro sisa no mirehitra…
Ny antsasak’ireo andrin-jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro miisa 167 napetraka eny amin’ny digy mihazo an’i Fenoarivo sisa ankehitriny no mirehitra ara-dalàna, fotodrafitrasa napetraka tamin’ny taona 2016. Ny ankoatra izay dia very sy maty avokoa.
Efa nividianan’ny kandida Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina andrin-jiro miisa 14 vaovao tany Sina, saingy tsy zakan’ny fahefa-mividin’ny kaominina Ampitatafika ny mandoa azy. Tsy mitazam-potsiny anefa ny tenany tamin’ny naha Ben’ny tanàna azy fa efa nanakarama olona enina isam-bolana mihitsy mba hiambina eny amin’ny digy ka telo taona katroka izao no nahalasa mpiasan’ny kaominina raikitra ireo olona ireo, mandray karama isam-bolana. Hatreto dia olona miisa 14 no efa nampidirina am-ponja vokatr’ity halatra andrin-jiro eny amin’ny digy Fenoarivo ity ka sivy no nalefa eny Tsiafahy ary eny Antanimora ny ambiny. Tsiahivina fa 5 tapitrisa Ar no vidin’ny andrinjiro iray tamin’izany fotoana raha efa nidina 2 400.000 Ar kosa ny iray ankehitriny. Ankoatra an’Ampitatafika dia ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy Toamasina no nisitraka ity andrinjiro ity.